Malemy fanahy ve ianao - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-03 > Malemy fanahy ve ianao?
Ny vokatry ny Fanahy Masina iray dia ny fahalemem-panahy (Galatiana 5,22). Ny teny grika ilazana izany dia “praotes”, izay midika hoe malemy fanahy na miahy; maneho ny atao hoe "fanahy olombelona". Ny fahalemem-panahy sy ny fiheverana dia mifanipaka amin’ny fandikan-tenin’ny Baiboly sasany, toy ny Fandikan-tenin’i Genève Vaovao (NGÜ).
Tena manantitrantitra ny fahalemem-panahy na ny fiheverana ny Baiboly. Hoy izy io: “Ny mpandefitra no handray ny tany ho fananany.” (Mat 5,5). Na izany aza, ny fahalemem-panahy dia tsy teny malaza na be mpampiasa ankehitriny. Ny fiarahamonintsika dia variana amin'ny herisetra. Mba handrosoana dia mila milomano miaraka amin'ny antsantsa ianao. Miaina ao anatin'ny fiarahamonina kiho isika ary ariana haingana ny malemy. Fahadisoana lehibe anefa ny mampifandray ny halemem-panahy amin’ny fahalemena. Ny fahalemem-panahy na ny fiheverana dia tsy fahalemena. Jesosy dia nilaza ny tenany ho olona malemy fanahy, lavitry ny anabavy malemy sy tsy misy hazon-damosina izay nanalavitra ny olana rehetra (Matio 11,29). Tsy niraharaha ny manodidina azy na ny zavatra nilain’ny hafa izy.
Maro ny olo-malaza ara-tantara, toa an-dry Lincoln, Gandhi, Einstein, ary Neny Teresa, nalemy fanahy na nihevitra fa tsy natahotra. Tsy nila nampiseho ny maha-zava-dehibe azy ireo tamin’ny hafa izy ireo. Nanana fikasana sy fahaiza-manao izy ireo hiatrika izay sakana rehetra apetraka amin’ny lalany. Tena sarobidy amin’Andriamanitra izany fanapahan-kevitra anaty izany (1. Petrus 3,4) Tena mila hery anaty tokoa ny tena malemy fanahy. Ny fahalemem-panahy dia lazaina ho hery voafehy.
Mahaliana fa ny teny hoe "malemy paika" dia tsy re matetika talohan'ny vanim-potoana kristiana ary tsy fantatra ny teny hoe "tompokolahy" Ity kalitao avo lenta ity dia vokatra azo avy amin'ny vanim-potoana kristiana. Ny fahalemem-panahy na ny fiheverana dia aseho amin'ny zavatra eritreretintsika momba ny tenantsika sy ny fiheverantsika ny hafa.
Ahoana no fomba itondrantsika ny hafa rehefa manana fahefana momba azy ireo isika? Sambatra izay olona tsy mieritreritra bebe kokoa momba ny tenany noho ny tokony ho rehefa midera sy manohana azy ny hafa raha oharina amin'ny fotoana teo amin'ny fiainana fony izy mbola tsy nisy.
Tokony hitandrina isika amin’ny teny lazaina5,1; 25,11-15). Tokony hitandrina isika amin’ny fomba itondrantsika ny hafa (1 Tes 2,7). Tokony ho tsara fanahy amin’ny olona rehetra isika (Filipiana 4,5). Es ist nicht unsere Schönheit, die Gott an uns schätzt, sondern unser freundliches und ausgeglichenes Wesen (1 Petr 3,4). Ein Sanftmütiger ist nicht auf Konfrontation aus (1. Korintiana 4,21). Tsara fanahy amin’izay manao fahadisoana ny mampandefitra, ary fantany fa nety ho nanjo azy mora foana ny diso! (Galatianina 6,1). Miantso antsika Andriamanitra mba ho tsara fanahy sy hanam-paharetana amin’ny olona rehetra ary halemy fanahy sy hifankatia (Efesiana). 4,2). Wenn jemand, der göttliche Sanftmut besitzt, aufgefordert wird, eine Antwort zu geben, dann tut er dies selbstbewusst, nicht mit einer offensiven Haltung, sondern mit Sanftmut und dem gebotenen Respekt (1 Petr 3,15).
Tsarovy: ny olona manana toetra malemy fanahy dia tsy manondro hevi-dratsy ho an'ny hafa, ary manamarina ny fitondran-tenany manokana, araka ny asehon'ny filazalazana manaraka ireto:
Ilay iray hafa
Raha maharitra ela ny iray hafa, dia miadana izy.
Raha maka fotoana lavitra aho dia mandinika tsara.
Raha tsy manana ilay iray hafa dia kamo.
Raha tsy izany dia sahirana aho.
Raha manao zavatra ny olona iray nefa tsy nasaina hanao an'izany, dia hihoatra ny fetrany.
Rehefa manao izany dia mandray an-tanana ny fandraisana andraikitra.
Raha tsy mijery fomba fitenenana ny olona iray hafa dia tsy mahalala fomba izy.
Raha tsy miraharaha ireo fitsipika aho dia niorenako izany.
Raha ny hafa manome fahafaham-po amin'ny lehibeny, dia malina izy.
Raha tiako ny boss, dia miara-miasa aho.
Raha ny hafa no mandroso dia vintana izy.
Raha afaka manohy aho dia izany fotsiny, satria efa niasa mafy aho.
Ny mpanara-maso malemy fanahy dia hitondran'ny mpiasa ny fomba tiany hitondrana azy - tsy hoe mety fotsiny izany, fa satria fantany fa mety ho indray andro any dia hiasa izy ireo.